Bindu Rinogadzira Fekitori | China Bindu Rinogadzira Vagadziri, Vatengesi
Ichi ndicho chimwe chechigadzirwa chedu chitsva, chakagadzirwa neyedu nyanzvi yeR & D dept. Isu tanga tichishanda pane ino yekucheka kubvira gore rapfuura, ikozvino zvobuda. Product Ichi chigadzirwa chinopisa kutengesa muUS, Euro, Japan, misika yeSouth Korea, Mazhinji emhuri ikoko ane yavo gadheni uye yadhi, izvo zvinounza zvikumbiro zvakakura zvekucheka yebasa reuswa ne gadheni. Yedu isina tambo yehuswa yekucheka yakagadzirwa uye kugadzirwa kune yedu yepamusoro chiyero chekuvimbika, kureruka kwekushanda, uye opareta chengetedzo. Pr ...
Mucheka Wegorosi 02
Brush Cutter uye Strimmer ndeye Yakanaka yekukomberedza kutenderedza gadheni, pamwe nebasa rinorema pamakwenzi nemabhurashi makobvu Yakagadzirirwa vese vehunyanzvi nevashandisi vepamba zvakafanana, yakanaka kuchengetedza nzvimbo hombe nediki, kutema bhurasho rakakora, kucheka huswa nemasora kutenderedza miti uye nekuchengetedza gadheni rakachena. Chigadzirwa Chigadzirwa Gaslion Grass Trimmer Nyaya Isina Simbi & Aluminium & ABS Kurema 8/9 KGS Mafuta tangi chinzvimbo 1200ml Package Saizi 1Pcs injini / Ruvara bhokisi, 1Pcs Shaft / CTN ...
Mucheka Wekusvina 03
FEIHU Nyowani dhizaini YEMAHARA DZIMWE / BUSHA CUTTER inosanganisa imwe 12V emagetsi module mabhatiri kuendesa 12V simba & kuita. Nekwaniso yekukasira kuchinjisa pakati pekucheka & mu-mutsetse mavhiri kutenderera iyi 2-in-1 dhizaini inogona kupa mhinduro dzehunyanzvi. Kusiyana neyakajairika anodhirowa iyo FEIHU inozvirumbidza neyakajeka mutsara wekudyisa michina iyo inodyisa 1/4 ″ YeMutsetse Pakarepo nekudzvanya bhatani. Hapana bumping kana kumirira auto-feed mhinduro. Nenzira dzakasiyana siyana dzekugadzirisa trimm ...